प्लस टुपछिकाे गन्तव्य-१३
दिनेश गौतम काठमाडाैं, २९ साउन
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ‘प्लस टुपछिको गन्तव्य’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । आज हामीले एयर होस्टेजबारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो एयर होस्टेज ?
एयर होस्टेज काेर्समा विमान परिचारिका (Air Hostess) बन्न आवश्यक पर्ने ज्ञान सिकाइन्छ । याे काेर्समा यात्रुको सत्कार गर्नेदेखि आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने भनेर सूचना प्रवाह गर्ने तरिकासमेत सिकाइन्छ ।
प्लस टुपछि के पढ्ने ? परामर्श घरैमा
सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका एयर हाेस्टेज ट्रेनिङ सेन्टरले यो कोर्स सञ्चालन गरेका छन् । यो कोर्स केटाकेटी दुवैले पढ्न पाउँछन् । याे काेर्स पढ्ने केटीलाई एयर होस्टेज भनिन्छ भने केटालाई फ्लाइट स्टेवर्ड भनिन्छ । तालिम तीनदेखि चार महिनाको हुन्छ ।
उचाइ केटीको ५ फिट २ इन्च र केटाको ५ फिट ६ इन्च हुनुपर्छ
१८ देखि २८ वर्ष
नियमित औषधि खानेले पाउँदैन
देखिने ठाउँमा ट्याटो नहानेको
अंग्रेजी भाषामा दक्खल भएकाे
ड्रेस र मेकअप
कुन–कुन क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्छ ?
विमान कम्पनी (सरकारी/निजी)
यात्रुको सत्कार गर्ने
यात्रुलाई सुरक्षा जानकारी दिने
यात्रुको रेखदेख गर्ने
मौसम जानकारी दिने
कार्ड चेक गर्ने
ब्रेक फास्ट, लन्च, डिनर सर्भे आदि
यो कोर्सकाे समयावधि तीन–चार महिनाको हुन्छ । याे काेर्सका लागि कम्तीमा ३० देखि ३५ हजार खर्च हुन्छ । तालिम दिने संस्थाअनुसार खर्च तलमाथि हुन सक्छ ।
एयर होस्टेज काेर्समा सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । इन्स्टिच्युटमै नमुना जहाज बनाइएको हुन्छ । त्यसैमा सबै कुरा सिकाइन्छ ।
नेपालमा पढाइ हुने एयर हाेस्टेज ट्रेनिङ सेन्टरहरु
फ्लाइटेक इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं
एयर होस्टेज तालिम इन्स्टिच्युट, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
एभिएसन नेपाल, बानेश्वर, काठमाडौं
राष्ट्रिय उडानमा कम्तीमा ३०–६० हजार मासिक कमाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कम्तीमा १ लाख ५० हजारसम्म कमाउन सकिन्छ ।
नेपालमा मात्र हाेइन, अन्य देशका विमानमा समेत परिचारिका भएर काम गर्ने अवसर पाइन्छ । ठूला–ठूला जहाज कम्पनीले नेपालबाट परिचारिका लैजाने गरेका छन् । विशेषगरी, इमानदार, मिलनसार र सहनशील परिचारिका विदेशी कम्पनीको रोजाइमा पर्छन् ।
त्यस्तै, जहाज एक देशबाट अर्को देश जाने भएकाले विभिन्न देश घुम्ने अवसर पाइन्छ ।
आकर्षक र प्रतिष्ठित पेसा
नजिर हुसेन, प्रबन्ध निर्देशक, फ्लाइटेक इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड
नेपालमा पनि एयर होस्टेजलाई आकर्षक र प्रतिष्ठित पेसाका रुपमा लिन थालिएको छ । च्यालेन्जिङ र ग्लामरस पेसा भएकाले तालिम लिनेको संख्या बढेको छ ।
तीन–चार महिना तालिम लिएपछि काम गर्न सकिने भएकाले पनि विद्यार्थीको रोजाइमा एयर होस्टेज पर्न थालेको हो । यो कोर्स पढेपछि व्यक्तित्व विकासका साथै अन्य क्षेत्रमा जान पनि सहज हुने गरेको छ ।
एयर होस्टेजको तालिम लिएपछि परिचारिका नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । विमानस्थलकै विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गर्न सकिन्छ । कुनै पनि जहाजको सेवा राम्रो नराम्रो हुने परिचारिकाको हातमा हुन्छ ।
परिचारिकाले यात्रुलाई नराम्रो व्यवहार गरेमा जहाज कम्पनीलाई नराम्रो असर पर्न सक्छ त्यसैले राम्रो एयर होस्टेज शिक्षा आवश्यक छ ।
विमान कम्पन्नीको ब्रान्ड एम्बेस्डर
कमलेश पाण्डे, निर्देशक, एयर होस्टेज तालिम इन्स्टिच्युट
एयर होस्टेज विमान कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेस्डरभन्दा फरक पर्दैन । विमान र पाइलट भएर मात्र हुँदैन । विमानमा यात्रुसँग एयर होस्टेज र फ्लाइट स्टेवर्ड रहन्छन् । सबै यात्रुको रेखदेख गर्नेदेखि उनीहरुको यात्रालाई राम्रो बनाउने भनेको एयर होस्टेज र फ्लाइट स्टेवर्डले नै हो । यात्रु चढ्दादेखि झर्दासम्मको सत्कार नै विमानको पहिचान हो ।
विमान कस्तो हो भन्ने पहिचान बनाउने काम एयर होस्टेज र फ्लाइट स्टेवर्डको हातमा हुन्छ । दिन प्रतिदिन जहाज थपिने क्रममा छ । चार महिना तालिम लिएपछि जागिर पाइने क्षेत्र हो । राम्रो अवसर छ । विदेशी विमान कम्पनीले समेत नेपाली एयर होस्टेज माग गरिरहेका छन् ।
नेपालीको स्वभाव, आदर र सत्कार गर्ने शैली राम्रो भएकाले ती कम्पनीले नेपाली एयर होस्टेज र फ्लाइट स्टेवर्डलाई अवसर दिएका हुन् त्यसैले एयर होस्टेज र फ्लाइट स्टेवर्डका लागि उपयुक्त शिक्षा आवश्यक पर्छ ।
मानिससँग घुलमिल गर्न सक्नेले
एयर होस्टेजको आकर्षण
आकाशमा जहाज उडेको देख्दा आफूलाई पनि उडूँ उडूँ लाग्ने रहर कसलाई हुँदैन र ! पाखापखेरा, हिमाल, पहाड र टाकुरामा पुग्न मन लाग्छ । बादलभित्र हराउन मनपर्छ । यस्तै, रुचि भएकाको सपना हुन्छ, एयर होस्टेज बन्ने । देख्दा चिटिक्क । सुन्दर आकर्षक । मुस्कान । मीठो बोली ।
त्यस्तै सपना थियो, निशा सुनुवारको । पछि उनले एयर होस्टेजको तालिम लिइन् । अहिले उनी नेपाल एयरलाइन्समा कार्यरत छिन् । राम्रो ड्रेसअप, नम्र बोली, मिलनसार, व्यक्तित्व विकास हुने भएकाले पनि उनको रोजाइमा एयर होस्टेज परेको हो ।
त्यस्तै सपना थियो शिल्पा पन्थीको पनि । सानैदेखि एयर होस्टेज बन्ने सपना पू्रा भएको छ शिल्पाको । एयर होस्टेजको तालिम लिएपछि अहिले उनी सौर्या एयरलाइन्समा कार्यरत छिन् । यही पेसाबाट आफ्नो जीवन चलाउन सकिनेमा उनी ढुक्क छिन् । एयर होस्टेजको तालिम लिएपछि आफ्नो व्यक्तित्व विकाससमेत हुने उनी बताउँछिन् ।
अन्त्यमा, नेपाल सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाइरहेको छ । विमानस्थल निर्माणसँगै नयाँ जहाज थपिने क्रम पनि जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बढ्दो क्रममा छ । निजी क्षेत्रका जहाज कम्पनीले पनि जहाजको संख्या थपिरहेका छन् ।
नेपाल एयरलाइन्स, बुद्ध एयरलाइन्स, सूर्य एयरलाइन्स, यति एयरलाइन्स, तारा एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्स, कतार एयरलाइन्स, इतिहाद एयरलाइन्स, थाई एयरलाइन्स, एयर चाइनालगायतका जहाजमा काम गर्ने अवसर पाइन्छ त्यसैले दक्ष एयर होस्टेज र फ्लाइट स्टेवर्ड उत्पादनका लागि राज्यले पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६, २२:४२:००